Daldalaan lammii Kanaadaa Doolaara Kanaadaa miiliyoona 1 gubuu isaa mana murti beeksise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Daldalaan lammii Kanaadaa Doolaara Kanaadaa miiliyoona 1 gubuu isaa mana murti beeksise
On Feb 11, 2020 44
Finfinnee, Gurraandhala 3, 2012 (FBC) – Daa’ima haadha manaa isaa duraarraa godhateef guddisa hin kaffalu jechuun Doolaara Kanaadaa miiliyoona 1 gubuu isaa mana murtii kan beeksise daldalaan lammii Kanaadaa gochi isaa ijoo dubbii ta’eera.
Jiraataa Otowaaw kan ta’e namni Bruus Makuunviilee jedhamu tilamaaman Doolaara Kanaadaa kuma dhibba 7 fi kuma 50 ta’u herreega baankii garagaraa 6 irraa baasii taasisuun isaa ibsameera.
Namni kun Fulbaanaa 23,bara Faranjootaa 2019 Doolaara Kanaadaa kuma dhibba 7 fi kuma 43, Muddee 15 ammoo Doolaara Kanaadaa kuma dhibba 2 fi kuma 96 gubuu isaa mana murtiitti dhiyaate abbootii seeratti himeera.
Namni kun kanaan dura nama gocha akkasiin hin beekkamne, nama hojii daldalaan waggaa 31 dabarseedha jedhameera.
Maallaqicha gubuu isaa viidiyoon waraabbamee fi suurri ragaaf dhiyaateera.
Abbaan seeraa mana murtii olaanaa Keeviin Filiippis gochicha amanuun baayy’ee nama rakkisa jechuun murtii cimaan akka isa eeggatu himaniiru.
Maanguddoon umrii waggaa 114 dhibee vaayrasii koroonarraa dandamachuu ibsame
Xaaliyaanitti haati warraa fi abbaan warraa harka walqabatanii osoo jiranii lubbuun…
Biyyoonni miseensa Gamtaa Awrooppaa talaallii vaayrasii koroonaa oomishamuuf…
Dubartiin umri waggaa 65 ulfa ta’uu isaanii osoo hin beekin ilma dahan
Maanguddoon umrii waggaa 114 dhibee vaayrasii koroonarraa…
Xaaliyaanitti haati warraa fi abbaan warraa harka…
Biyyoonni miseensa Gamtaa Awrooppaa talaallii vaayrasii…